PlexEarth, Kedu ihe na-eweta mbipute 2.5 maka onyonyo ụwa Google - Geofumadas
Septemba, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps, innovations
Enwetara m ụdị atụmatụ nke PlexEarth ọhụrụ, nke a na-atụ anya na a ga-akpọsa ya na mbubreyo nke ọnwa 2011.
Isi ihe kpatara na ngwa ọrụ a anabatala nke ọma bụ na ọ na-edozi ihe mmemme CAD kachasị ewu ewu (AutoCAD) enweghị ike iji ụwa mebere achọkarị (Google Earth), ọ na-eme ya n'ụzọ kachasị dị ọcha anyị nwere. hụrụ maka nyiwe CAD. Ihe kacha mma m hụworo Jikọọ AutoCAD na Google Earth.
Ọ bụ inwe ike zuru ezu nke ọdịnaya dị na Google Earth na ngwá ọrụ ndị a kapịrị ọnụ nke AutoCAD.
M zutere mbipute mbụ nke PlexEarth na November nke 2009, mgbe ahụ 2.0 mbipute na May nke 2010, mgbe nke a gasịrị, anyị ahụla mgbanwe ole na ole, ọ naghị akwado akwado ọsọ na AutoCAD 2012 mana na ọnwa ole na ole anyị ga-ahụ mbipụta 2.5.
Ekwuru m otu n'ime ndị kere ya, ndị m bu n'obi ka ha nwee mkparịta ụka nkịtị na Amsterdam n'oge ọnwa nke ọnwa November, e meela ka mmelite ndị gụnyere na mbipute a dabere na "ndị kasị rịọ" site n'aka ndị ọrụ ugbu a.
Ike dị ukwuu n'ịgwọ ihe oyiyi.
Anyị ahụla PlexEarth ihe ndị ị nwere ike ime obodo 3D ma ọ bụ CivilCAD, ma na nke a ọ na-abịa na ike ndị a pụrụ ime naanị Raster Kere na nke a na ụdị ihe oyiyi ọ bụla, ọ bụghị dị na Google Earth.
Jikota Images (jikota). Ugbu a, ị nwere ike were otu onyogho nke onyogho ma sonye ha n’ime nke nwere aha ohuru ma chekwaa ọdịdị ọdịdị.
Osisi Ugbo (akuku). Mepụta ihe oyiyi na-adabere na polygon, na-echekwa ọdịdị ahụ, na mgbakwunye na ngwá ọrụ gara aga, enwere ike wulite ihe oyiyi dabere na geometries ụfọdụ, ọ bụchaghị akụkụ anọ. Ọ dị mma maka iwepu ebe Google Earth enweghị ezigbo mkpuchi.
Dochie ihe oyiyi (dochie). Ọ bụrụ na anyị ebudatara ihe oyiyi na Google Earth, wee nwee mkpuchi ọhụụ, anyị nwere ike ịrịọ mmelite nke otu mpaghara ahụ na-enweghị ịkọwa ya ọzọ. M na-ahụkwa ọtụtụ ikike maka arụmọrụ a, ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ihe oyiyi dị elu karịa Google Earth Pro, ọ bụ ezie na ọ bụ otu mkpuchi ahụ, mkpebi dị na pikselụ ka mma n'oge mbubata ya na AutoCAD.
Ugbu a, ọ ga-ekwe omume ịbubata na mbupụ ihe oyiyi mgbe ị na-enwe nkụnye eji ederede aha.
Mmelite na nhazi nke dijitalụ.
Dị ka m kọwara na mbipụta m nke 2.0, PlexEarth nwere ike ibubata ụdị dijitalụ site na Google Earth, mepụta ihu, usoro akara, gbakọọ mpịakọta, na ihe ndị ọzọ Civil 3D na-eme. Otú ọ dị, ihe na-adịghị mma na-eme, nke ahụ bụ Google Earth bane el ID nnọkọ mgbe ị na-eme nnukwu download. Emeziwo nke a n'ụzọ dị egwu, ngwá ọrụ ahụ maara ọnụọgụ kachasị nke Google Earth na-enye ohere ibudata, na tupu ha emechaa ha, ọ na-emechi ma meghee Google Earth, nke ọhụụ ọhụrụ ahụ ID nnọkọ na-aga na-eme ka ikwe ka nbudata nke ọtụtụ nde isi na-enweghị nsogbu.
Mgbanwe dị ka ụdị ikikere
Ugbu a na PlexEarth, kama nke nsụgharị Standard, Pro na Premium, a na-atụ aro ụdị ikikere atọ:
Ikike kwa ọnwa, dị ọnụ ala. Na nke a, enwere ike idozi mkpa maka otu ọrụ, na-akwụghị ụgwọ ikike ogologo oge, na-enwe ike iji ikike niile AutoCAD n'onwe ya na-enyeghị.
Akwụkwọ ikike kwa afọ. Ebumnuche ya maka ndị ọrụ na-arụ ọrụ ugboro ugboro na isiokwu ahụ, n'etiti nyocha, injinia, geospatial na cadastre.
Akwụkwọ ikike ebighi ebi. Nke a maka ndị kwenyere na ngwá ọrụ ahụ ga-adị mkpa na ọrụ na-adịgide adịgide.
Na Spain, ị nwere ike ịnweta ikikere CADMax
Na Czech Republic na Slovakia, CADStudio
Na United States na CommTech
Maka Latin America, ebe ị nwere ike Download PlexEarth
Previous Post«Previous Ihe dị ọhụrụ na MobileMapper Field na MobileMapper Office
Next Post Ịdọ aka ná ntị nke ozi ịgha ụgha na GeofumadasNext »